Ololli GarbummaaF Furmaata Hin Tahu! | QEERROO
Posted on May 21, 2018 by Qeerroo
Impaayeera Itoopiyaa keessatti jijjirama Mootota Habashaa keessaa Haayile Selaassie Amma Dr. Abiyi arguuf umurii dheeraa warri argate eeba Waaqayyoo qabu. Waan dhugaan seenaan raga bahu Mootoni Habashaa hundi afuura sobaan kan guutaman, dhugaa wajjin kan garaa fi dugda tahan uummata isaanii sobuu fi afaanfajeen bara baraan warra hawwii qaban akka tahe ifa jira. Waan uummatni irratti baraa fi dammaqaa deemuuf tooftaa fi malaamaltummaan tokkoof hojjeete isaa haaraaf akka hin hjjenne bareechanii beeku. Haayile Selaasseen Waaqatu na muudee jedhe. Dargiin kaayyoo sooshalizimii fi komoniziin afarsaadhaan uummata gura duuche. TPLF kaayyoo dimookraasii haaratu nagaa fi badhaadhina fida jettee ilmaan biyyaa kumaatan hiitee, kumaatamaan ajjeeftee, kumaatamaan naaf gootee biyya guutuu saamuun nama utuu hin taane biyyumti Itoopiyaa jedhamtu akka hiyoomtu goote.
Hoogantonni OPDO afaan damma dibatanii waan uummata Oromoo jaallatanii fi haqa isaaf dhaabbatan fakkaatanii qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo bilibilaa jiru dhaamsuuf bishaan itti guuraa jiru. Fuula tokkoon ololla hiikaa hin qabne afuufuudhaan uummata waan ciniinee bulu hin qabne abjuun booka obaasaa fi cooma nyaasaa jiru. Karaa duuba waaraanni TPLF maqaa Labsii Yaroo Muddamaan biyya keenya irra qubatee uummata keenya akka saree bahaa fi galma dhowwaa jira. Amma iyyuu of dhoksuuf haa gidiran , ammam iyyuu fakkeessuuf haa wixxifatan dhugaan jiru ololli sobaa garbummaaf hiikaa hin tahu. Dhugaan lafa jiru rakkinni uummataa yoo kan caalu tahe malee waan furamuuf deemu miti. Dhimi isaanii inni duraa qabsoo Uummata Oromoo diibatee dhufe TPLF irraa baraaruu dha. Hojiin isaanii kun amma nama qarmii xaafii keessa gugguufaa jirutti. Hojii isaanii kana namni hin hubanne yoo jiraate ayyaanlalatootaa fi bitamtoota qofa.
Imaamatni TPLF bara 27 uummata Impaayeera Itoopiyaa ittiin burjaajessaa fi gowwoomsaa as geese har’a qabsoo uummataan keessattuu fincila Uummatni Oromoo godheen saaxilamee fudhatama dhabee jira. Imaamata Dr. Abiyi ittiin deemaa jiru Imaamata oduun qabeenyii fi badhaadhinni biyya Itoopiyaaf samii irraa roobuuf deemu fakkeessee imala lalabaa bakka bakkatti marmaaruu dha. Gaafa aangootti muudamu waggaa torbatti Moototummaa akka fudhatu mul’ata haadha isaa kaasee jira. Mul’anni gaafi sana ka’e ha’a gara imaamata ittiin biyya bulchuu deemaa jira. Yaaddoon koo guddaan utuu humna waraana, tikee fi nagaa eegdu aboome mul’ata isaa kana Sanyii Solomon Dynasty wajjin wal qabsiise Minilki Sadaffaa akka of hin mogaafne dha.